आरक्षण : अवसर एक, दुरुपयोग अनेक
शम्भु रसाली असार ३०, 2075
दलित शब्दले नेपालको संस्कृती र परम्पराअनुसार पानी नचल्ने वा अछूत जातहरूलाई एकताको शुत्रमा बाध्ने काम गरेको छ । त्यही एकताले नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत शैक्षिक निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । आरक्षणको उपयोग गरेर केही सभासद, केही सांसद, केही मन्त्री, केही निजामती कर्मचारी, केही डाक्टर, केही अधिवक्ता र इन्जिनियर आदि आदि भए ।
अवसर पाउने व्यक्तिले सबै पाए नाम, दाम, सम्मान र गुणात्मक जीवनस्तर । समुदायले पायो के त ? केही पाएन । यहाँ समुदाय भन्नाले समग्र दलित शब्दभित्र अट्ने लक्षित वर्ग पर्छन् ।
अवसर लिन म दलित हो भन्दै दलित आयोग धाउनेहरू जब अवसर लिन्छन् । किन म यो समुदायको हो भनेर गर्व गर्न सक्दैनन ? किन म यो समुदायप्रति पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा भुल्छन ?
अवसरको खोजी गर्नु मानवीय स्वभाव हो । अवसरको खोजीले नै मान्छेलाई लक्ष्यसम्म पुर्याई सफल बनाउँछ । समाज र समुदायप्रति उत्तरदायी हुँदैनन ? किन त्यति ठूलो समुदायको गुनलाई सजिलै बिर्सिन्छन् ?
विगतमा पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर विभिन्न निकायमा पुग्ने दलितहरू पनि थिए । तर ती हातको औलामा गन्न सकिन्थ्यो होला । उनीहरू आफ्नै क्षमताले पुगे आफ्नै लागि गरे । उनीहरूले समुदायका लागि जति गरे, त्यसको लागि उनीहरू धन्यवादको पात्र बनेका छन् ।
जो अहिले आरक्षणको सहारा लिएर त्यो स्थानसम्म पुगेका छन्, त्यसमा ५० प्रतिशत हात समुदाय वा दलित भन्ने शब्दको छ । त्यो स्थानसम्म पुर्याउन दलित शब्दले सहकार्य गरेको छ । ती व्यक्तीसँग साझेदारी गरेको छ । ती व्यक्तिसँग हातेमालो गरेको छ । असम्भवलाई सम्भव बनाइदिएको छ । अर्ध योग्यलाई योग्य बनाइदिएको छ । अर्ध सक्षमलाई पूर्ण सक्षम बनाइदिएको छ ।
यो भनेको साझेदारी वा सहकार्य होइन ? यदि हो भने सफल हुँदा त्यसको प्रतिफल दलित भन्ने शब्दले पाउने कि नपाउने ? अवश्य पाउनुपर्छ । यदि पाइँदैन भने सबैभन्दा ठूलो गद्दारी, ठूलो धोका र सबैभन्दा ठूलो वेइमानी त्यहीँ हुन्छ ।
शब्द र समुदायको खोल आढेर समुदायप्रति धोका दिनु के यो राम्रो कुरा हो ? यदि हो भने चाहिएको छैन । दलित शब्द र त्यो शब्दले आर्जेको आरक्षण । ९८ प्रतिशत जनतालाई बाटोमै छोडेर हिड्ने शब्द किन चाहियो ?
उसले पाएको मान, सम्मान र दाममा दलित शब्दको पनि हक हुनुपर्छ र समुदाय प्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित हुनुपर्छ । यदि प्रतिफलमा अधिकार हुँदैन भने जिम्मेवारी लिन पनि आवश्यक छैन । त्यस्ता व्यक्तिले दलित भन्ने शब्द राख्नुको कुनै औचित्य छैन ।
जबर्जस्ती रूपमा यो शब्दलाई राख्न खोजियो भने व्यक्ती मोटाउने, समुदाय दुब्लाउने क्रम चलिरहन्छ । व्यक्तिले मोहर कमाई रहने र समुदाय मोहरा बनिरहने खेल चलिरहन्छ ।
यहि शब्दको प्रयोग गरेर राजनीति गर्नेहरू व्यवस्थापिकासम्म पुगे, सभासद भए, सांसद भए र विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाए । जे पाउनु थियो, सबै सुविधा पाए, दलित शब्दले के पाए त ? हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स ।
शैक्षिक विकासका लागि सरकारले शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको ब्यवस्था गरिदिएको छ । त्यही व्यवस्थाको उपयोग गरेर कोही डाक्टर, कोही इन्जिनियर, कोही अधिवक्ता आदि आदि पाएका छन् । जब उनीहरूले सफल्ता पाउँछन्, दलित शब्दले पाउँछ के ? उनीहरूको दुबै हातमा लड्डु, दलित शब्दलाई के ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स ।
दलित शब्दलाई सापटी लिएर एनजिओ र आइएनजिओ चलाउनेहरू र त्यसमा जागिर खानेहरूले डलरमा तलब बुझ्ने गर्छन् । देशविदेश शयर गर्छन् र अन्तिममा राम्रो देश छानेर त्यतै भासिन्छन् । उनीहरूले सबै पाए दलित शब्दले के ? हात्ती आयो हात्ती फुस्स ।
यो आरक्षण लिने सबै जात, वर्ग, लिंग, धर्म, भुगोलका व्यक्तिहरूमाथी समर्पण छ । कुनै अमुक जाती वा वर्ग केन्द्रित छैन । आरक्षण राम्रो कुरा हो । तर, यसलाई अझ राम्रो व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । आरक्षणप्रति कसैले नकारातमक प्रश्न उठाउन जरुरी छैन । व्यक्तिले लिएको सुविधा समुदायले पनि अनुभव गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरूवात गरौं ।
आरक्षणलाई व्यक्तीमुखी होइन, समुदायमुखी बनाउने प्रयत्न गरौं । अनि मात्रै आरक्षणको महत्व बढ्छ । नत्र आरक्षण कसैकसैका लागि खेलौना बन्छ र आरक्षण हट्न पनि सक्छ ।
(लेखक गौरव बचत तथा श्रृण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।)
निर्माणकार्य थालिएको बाह्र वर्षपछि बल्ल मिल्यो सडक विवाद
जाजरकोट । निर्माणकार्य थालिएको १२ वर्षपछि जाजरकोट–जुम्ला सडकको विवाद मिलाउन कर्मचारीसहित प्रदेशसभ...
के कुण्डली वा हस्तरेखा हेरेर व्यक्तिको वर्तमान र भविष्य जान्न सकिन्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं । ज्योतिष विज्ञान हो । भलै यसका सकातात्मक र नकारात्मक पाटाहरु आफ्नै ठाउँमा छन् । तर पनि ...
दाइजोको निहुँमा श्रीमतीको हत्या गर्ने डाक्टर जेल चलान
काठमाडौँ । दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ डाक्टर सचितानन्द यादव पु...
पूर्वमन्त्री ताम्राकारको निधन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारको निधन भएको छ । रुपन्देहीको...
रसुवाबाट ७ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेबाट प्रहरीले ७ किलो सुन बरामद गरेको छ । ना ६ख ९०६८ नम्बरको कन्टेनरबाट प...
दुर्घटनामा एक महिलासहित २ जनाको मृत्यु
राजविराज । छुट्टा–छुट्टै स्थानमा भएको दुर्घटनामा गएराती एक महिलासहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । श...